MYU SHADAN: နှစ်ခုထဲက တခုခုကို ရွေးပါ။
မြန်မာ လူမျိုးများအနေနဲ့ ဗမာမှု ပြုခြင်း နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကို တပြိုင်ထဲ ရယူလို့ မရနိုင်ပါ။ နှစ်ခုထဲက တခုခု ကို စွန့်လွတ်ရမည်။
တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး ကို ပေးပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ကြီးပွါးတိုးတက်မှု ကို အမှန်တကယ် ရယူ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရာရာ အားလုံး ဗမာမှု ပြုခြင်း နဲ့အတူ စစ်ရဲ့အနိဌာရုံသည်လဲ ဆက်လိုက်လာမည်သာ ဖြစ်သည်။
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်ကြီးရဲ့ အစီရင်ခံစာ အရ၊ ပြီးခဲ့သော တစ်နှစ်ခွဲကြာလ ကြာ စစ်ပွဲအတွင်းတွင် ကချင်ရွာပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အပြင်၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ၆၆ ခုကိုလဲ ဖျက်ဆီးပေးလိုက်ကြောင်း စာရင်းတင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ (အသေးစိတ် သိလိုသူများ နှစ်ခြင်း အသင်းချုပ်ရုံးသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်သည်။) ထိုအကြောင်းအရာများ မြန်မာ အစိုးရ ပိုင် မီဒီယာ များမှာ ဘယ်တော့မှ ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အကယ်၍ ကေအိုင်အေသာ ဗမာရွာ နှင့် ဗမာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဒီလောက် အများအပြားကို လုပ်မိခဲ့လို့ ရှိရင် မြန်မာပြည်က ရှိရှိသမျှ မီဒီယာများတွင် မည်သို့ ဝေေ၀ဆာဆာ ဖေါ်ပြမည်ကို စိတ်ကူးလို့ရနိုင်ပါသည်။
လွတ်လပ်ရေး ရခါစက ဖဆပလ ပါတီ ဦးဆောင်သော ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ ခေတ်တွင် တိုင်းရင်းသား များ၏ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာ များကို မသိကျိုးကျွန်ပြုခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ မူလ ရပိုင်ခွင့် နိုင်ငံရေး အာဏာ ခွဲဝေမှုများကို ဥပါက္ခာပြုထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ဆက်တွဲ ပြည်တွင်းစစ်မှသည် စစ်အာဏာ ရှင် အဆက်ဆက်ကို မွေးထုတ်လာခဲ့ရသည်။
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာလာသည့် ပြည်တွင်းစစ်တွင် တရုတ်ကွန်မင်တန် များ ထိုင်း နဲ့ ထိုင်ဝမ် ကို ခိုလုံသွားတာက လွဲ၍ ကျန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်များ တခုမှ အမြစ်ပြတ်သွားတယ် ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါ။
ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်ည ဘီဘီစီ ရဲ့ ဆွေးနွေးဖလှယ် အစီအစဉ်မှာ ဦးလှဆွေ ရဲ့ ကေအိုင်အေ အမြစ်ပြတ် တိုက်ရေး အဆိုကို အားပေးသော ဗမာ လူမျိုးများ အများအပြား ရှိနေသေးကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရသည်။ ဗမာ အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ ဦးလှဆွေရဲ့ အဆိုကို သဘောတူသော လူမျိုးများတွင် ဗမာ မဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားများ မပါခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။
ကေအိုင်အေ နဲ့ အခြား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ နိုင်ငံရေး တောင်းဆိုမှုများကို နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအဖြင့် မမြင်ပဲ၊ ချိုးနှိမ်သော သဘောနှင့်သာ ဆက်ပြီး ဆက်ဆံသွားမည် ဆိုလျှင် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျိုးဆက် ကို ဆက်ခံသွားဖို့သာ ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာ နိုင်ငံသည် အမေရိကန် နိုင်ငံ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေး သမိုင်းသည် မည်သည့် နိုင်ငံ နှင့်မျှ မတူပါ။ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ တောတောင် သဘာဝ သည် မည်သည့် နိုင်ငံရဲ့ စစ်ရေး အတွေ့အကြုံနှင့်မျှ တိုင်းတာ၍ မရပါ။
ကချင်တော်လှန်ရေးသည် မာလီသူပုန်များ မဟုတ်ပါ။ ကချင်တော်လှန်ရေးသည် မည်သည့်လူမျိုးမျာ၏ရွာပေါင်း ၂၀၀ ကျော် နှင့် မည်သည့်ဘာသာခြား လူမျိုးများရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ နေရာများကို မဖျက်ဆီးဖူးပါ။ မည်သည့်နေရာတွင်မှာ အသေခံ ဗုံးမခွဲဖူးပါ။
ကချင်လူမျိုးများရဲ့ မရသေးသော မူလ ရပိုင်ခွင့်ကို တောင်းဆိုနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးများကို ယုံစားခဲ့သော အဖြစ်ဆိုးမှ နိုးထလာခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကေအိုင်အေဟာ ကချင်လူမျိုးများကို ကိုယ်စားမပြုဘူး ဆိုရင် ကချင်လူမျိုးများကို ကိုယ်စားပြုသော နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းပြပေးပါ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဗမာလူမျိုးအစုအဖွဲ့က ရွေးချယ်ခန့်ထားသော ကချင်လူမျိုးကိုင်တိုင် အုပ်ချုပ်တာကို တောင်းဆိုတာ မဟုတ်ပါ။ ကချင်လူမျိုးများကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခန့်ထားသော ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူများ ဖြစ်ပေါ်လာရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေး ကို နိုင်ငံရေး အရ မဖြေရှင်းပဲ၊ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ တော်လှန်ရေး ကို ချိုးနှိမ်နေခြင်းသည်၊ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ မူလရပိုင်ခွင့်ကို လစ်လှူရှု့ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဒီလိုနည်းလမ်း နဲ့ ဘယ်လိုမှ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ပါ။ တနိုင်ငံလုံးသာ လုံးပါးပါးသွားမည်၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်မှ အမြစ်ပြတ်မှာ မဟုတ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ တကယ်တမ်း မြန်မာ နိုင်ငံကို ချစ်တယ် ဆိုရင်၊ ဗမာ မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလဲ ချစ်တတ်ရပါမည်။ လေးစားရပါမည်။ ပင်လုံကတိက၀တ်ကိုလဲ လေးစားရမည်။
တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး မပေးပဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် ကြီးပွါးတိုးတက်ရေးကို မျော်ကိုး၍ မရနိုင်ပါ။
ုတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို လစ်လျူရှု့ပြီး ဗမာမှုပြုခြင်းကိုအားသာနေလျှင် ပြည်တွင်းစစ် ဆက်လက်ရှည်ကြာမည်။ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် စစ်စရိတ်ထောင်းမည်။ အခန့်မသင့်လျှင် စစ်အာဏာရှင် မိသားစု နောက်တဖွဲ့ထပ်ပေါ်လာမည်။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးမှာ ဆက်ပြီး နှိမ့်ကျနေမည်။ ပညာရေးမှာ အရင်းအနှီးမစိုက်ထုတ်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများကို လိုက်မီဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသော ခေတ်ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟာ အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်က တက်လာစရာ မရှိပါ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Durham University က ဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသီ Jonathan Rigg ရဲ့ အဆိုအရ နိုင်ငံ တနိုင်ငံရဲ့ တဦးချင်းဝင်ငွေ တိုးတက်မှုနှုန်းထားသည် နိုင်ငံတော်ဘက်ဂျက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ကို ပညာရေးမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ နေရာ မူတည်တယ်၊ လို့ ဆိုပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်လာမည်။ ပြည်တွင်းစစ်များ ငြိမ်းသွားမည်။ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေးမှာ အရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်လာနိုင်မည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်သာ ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ ဗမာမှု ပြုခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဘယ်ဟာကို အလိုရှိပါသလဲ။ နှစ်ခုထဲက တခုခုကို ရွေးရမည်။ နှစ်ခုစလုံးတော့ တပြိုင်ထဲ မရနိုင်ပါ။
Posted by myu shadan at 2:53 PM
ကြွက်လည်း ကြောက်ရ … အထက်လည်း ကြောက်ရ ရန်ကုန်ရဲတို့...
(Madat yu ga, saw lajin ai ) Meeting With Thura Sh...
ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၁၀) ဒေသတွင် တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်...
တပ်သားတိုးရေး အလေးပေး၍ ကလေးစစ်သား များလာရဟု အစီရင်...
တရုတ်နယ်စပ် ဖြတ်သန်းခွင့်စာအုပ် အတုဟုဆိုကာ မူစယ်တွ...
Myen Hpyen dapamajan hkyen ai ladat hpe yu maram...
မန္တလေး ကျောက်ဝိုင်း မဖျက်ရေး တောင်းဆို
မိုင်ဂျာယန်ဒေသရှိ နေရပ်ပြန် ကချင်ဒုက္ခသည်များ ဆေးဝါ...
UNFC MEETING CHINANG MAI 20.FEBRUARY part 2
ကြေးနီစီမံကိန်းဆိုင်ရာ သယံ ဇာတကျိန်စာ ဓါတ်ပုံပြပွဲ...
Thai ဖုန်းကဒ်များဖြင့် အင်တာနက် လိုင်းစမတ်နည်း
ဖုန်းတွေကို Custom ROM တင်နည်း
Google Play က Free App တွေကို ကွန်ပျူတာသို့ Downlo...
UNFC နှင့် အစိုးရ တို့ နိုင်ငံရေး စဆွေးနွေးပြီ
KNU ဥက္ကဌ နှင့် ဒုသမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်း တွေ့ဆုံ
တရုတ်နယ်စပ် ဂျေယန့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေး ၂၀ ကျော်...
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် လုပ်ေ...
၁၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်ကို အဓမ္မ ပြုကျင့်ဟု စွပ်...
http://adf.ly မှ Download ချနည်း
လုံခြုံရေးအတွက် USB Safeguard 6.0
Smadav 2012 (latest version 9.0)
အခြေခံဒီဇိုင်းနှင့် Graphic အနုပညာ (မြန်မာလို)
အစိုးရနှင့် UNFC တွေ့မည်
mp3 mp4 လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း (မြန်မ...
Complete Network Guide (မြန်မာလို)
Giveaway Video to GIF Converter 1.1 Free License C...
Nippon Aid Kayin and Mon War Refugee.
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များနှင့် အနာဂတ...
AUTODESK 3D Max အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
အစိုးရနှင့် UNFC အဖွဲ့ လာမည့်တစ်ပတ်အတွင်း တွေ့ဆုံမ...
မြစ်ကြီးနား ဇီးလွန် မူလတန်းကျောင်း မီးလောင်မှု ကျော...
UNFC နှင့် အစိုးရ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ဂ...
ဗိုလ်ရာဇာနေ့ အခမ်းအနား နယ်သာလန်ရောက် ရခိုင်-ကရင်မျ...
KIA and Government Delegation Meeting in Shweli
ကချင်အရေး ဆွေးနွေးမှုအပေါ် နော်ဝေကလည်း ကြိုဆို
အစိုးရနှင့် KIO တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အပေါ် ကုလ ကြိုဆို...
ဟားခါး ချင်းလူငယ်တွေ ပေါင်းစည်းပြီ
4/02/2013 KIO and Myanmar Gov meeting at Shwe Li
KIA က တော်တော် ကို လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိသွားပါပြီ။
KIO calls for dialogue ahead of talks
ရွှေလီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ တရုတ် ကြားဝင်ဆောင်ရ...
ကေအိုင်အိုအစိုးရ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ၂၀၁၃၊၀၂၊၁
နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အမြန်ဖြစ်ပေါ်ရန် မွန်ြ...
KIA နှင့် အစိုးရတို့ တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်နေ
KIA အထက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အချို့ ဌာနချုပ်မှ ခရီးထွက...
အစိုးရနဲ့စစ်တပ် အကြံအစည်ဟာ KIO ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှု...
Laiza Tonight (mahkawn yungwi)